20 Mar, 2015 - 00:03	 2015-03-20T07:40:55+00:00 2015-03-20T00:00:29+00:00 0 Views
Ndiri mukomana ane makore 21 ndiri kutsvagawo musikana ari kuda zvekuroorwa. Ari pachokwadi ngaandibate pa0775 891 637.********
Makadii veTishamwaridzane? Ndinonzi Blessing ndine makore 30 uye ndinotsvagawo mudzimai wokuroora ane makore 19 – 26. Ndinoita basa remawoko, handisi pamapiritsi. Anondifarira ngaandibate pa0774 739 724.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 38 nevana 2 uye ndinodawo murume ari pachokwadi ane makore 39 kusvika 45. anoda Ngaandibate pa0779 135 306.
Ndine makore 22 uye ndiri kutsvagawo musikana wekuwana ane makore 18 kusvika 21
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 38 nevana vaviri ndinotsvagawo mukadzi ane makore 30 zvichidzika. Nhare yangu 0716 359 573.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvagawo musikana wekuroora mutsvuku akanakawo uye anonamata. Ngaave akapasa zvidzidzo zvinotangira pa3 zvichikwira paO-Level. Ndiri HIV negative,nhamba dzangu 0779 068 447.
Ndiri murume ane makore 32 ndotsvagawo mukadzi ari pasi pemakore 27 asina mwana mupfupi, mushava, akasimba zviri pakati nepakati. Anoda zvemba ngaandibate pa0773 558 386.
Makadii veKwayedza? Ndine makore 28 uye ndiri kutsvagavo musikana ane makore 20 kusvika 25 anonamata Johane Masowe. Nhamba dzangu dzerunhare idzi 0778 271 799.
Ndiri mukadzi ane makore 35 nevana 2 ndinotsvagawo murume anoda zvekuroora. Anoda ngaandibate pa0716 754 009.
Ndine makore 28 uye ndinotsvakawo musikana wekuwana anodira munhu zvaari kwete zvaainazvo. Ndinoda ari pachokwadi, ngaandibate pa0712 026 831.
Ndiri muchinda ane makore 29 ndinotsvagawo musikana wekuvaka naye musha ari pachokwadi ane makore 18 kusvika 25. Asina utachiona hweHIV uye akazvipira kuenda kunoongororwa ropa ngaandibate pa0775 978 249.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 25 ndinotsvakawo mukadzi anotya Mwari kana ane vana vaviri. Ndinodawo akavimbika anoshanda ari pachokwadi. Ngaafone pa0735 898 625, ndatenda hangu.
Ndiri mukomana ane makore 28 ndotsvagawo musikana wekuroora chero mukadzi ane mwana ane makore 20 kusvika 25. Vanoda ngavandibate pa0783 739 511.
Ini ndiri mukomana ane makore 20 uye ndiri muUpper 6. Ndinotsvagawo shamwari (penpals), vakomana kana vasikana vechidiki vane makore 16 zvichikwira vanoenda kuchechi. Anenge adawo kuve sahwira wangu ndibate pa0782 421 782.
Ndiri mudzimai ane makore 27 nevana 2 ndinotsvakawo murume anoda kuroora ari pachokwadi ane makore 30 kusvika 40. Ngaave anonamata, anoshanda uye anoda ini nevana vangu. Ndibatei pa0714 525 875.
Makadii henyu? Ndiri kutsvagawo musikana anoda zvemba ane makore 18 kusvika 21. Ndiri mukomana ane makore 23, nhare yangu 0717 213 117.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagawo musikana ari kuda zvekuroorwa ari pachokwadi asina chirwere. Ndinonzi Tinashe anoda ngaandibate pa0717 191 041.
Ndiri mukomana ane makore 27 ndinotsvakawo musikana wekuroora ane makore 20 kusvika 26 anogara muGweru. Ndibatei paWhatsApp pa0782 182 584.
Ndiri murume ane makore 31 nemwana 1 ndinotsvagawo mukadzi anoda zvemba ane vana kana asina, aine makore ari pasi peangu. Ndinozvishandira hangu ndichigara muHarare, anoda anondibata pa0778 387 223 kana paWhatsApp.
Ndiri mukomana ane makore 27 ndiri kutsvaga musikana ane makore 19-24. Nhamba dzangu dzinoti 0774 466 682 kana paWhatsApp zvinoita.
Ndodawo murume ari pachokwadi ane makore 30 kusvika 40, ndiri mukadzi ane makore 27 nevana 2. Vanoda ngavandibate pa0777 209 577.
Makadini? Ini ndiri mukadzi ane makore 48, ndakarongeka uye ndine zvinhu zvangu ndiri kutsvagawo shamwarirume ine makore anotangira pa48 zvichienda mberi. Vadiki kwandiri ndapota hangu musafone. Nhamba yangu 0734 928 818.
Ini ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvagawo musikana wokuroora ari pachokwadi asi ngaave nemakore ari pasi peangu akanaka. Anoda hake ngaandibate pa0713 926 369.
Ndiri mudzimai ane makore 26 nemwana mumwe, ndinotsvakawo murume ane makore 29 kusvika 32 anoshambidzika uye asina mukadzi. Ngaave asinganwe kana kuputa fodya. Nhare yangu 0717 314 811.
Ndiri murume ane makore 29 ekuberekwa nemwana 1, ndinotsvaka mukadzi wekufambidzana naye anoda kuroorwa. Ari pachokwadi anoda anondibata pa0734 789 104.
Ndiri mukomana ane makore 24 ndinodawo musikana ane makore 18 – 23. Nhare yangu 0737 585 514.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndoda mukadzi ane makore 18 – 22 ane mwana 1 kana asina. Anopinda kereke yePentercost ngaandibate pa0783 803 163.
Ndiri mukadzi ane makore 30 ekuberekwa nevana vaviri uye ndiri kutsvagawo murume ane vana vake ane makore 34 zvichikwira. Nhamba yangu iyi 0782 672 737.
Makadini zvenyu veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 27, handina mwana uye ndinodawo murume ane makore 35 – 40 anoda zvekunoongororwa ropa. Ndiri HIV negative, ndinozvishandira saka ndodawo anoshanda. Nhare yangu 0775 719 145.
Ndiri murume ane makore 27 ndinotsvagawo mudzimai ane makore 18 – 25 ane mwana mumwe chete seni. Anoda nezvangu ngaandibate pa0735 354 552.
Ndiri mukomana ane makore 21 ekuberekwa ndinotsvagawo musikana ane makore 18-20 mukadzi ane mwana mumwe. Anondida anondibata pa0716 531 140.
Ini ndiri murume ane makore 26 nemwana 1, HIV negative uye ndotsvaga musikana wokuroora ane makore 24 zvichidzika. Ari pachokwadi nhare yangu 0775 846 161.
Ndinonzi Alphiey ndiri kutsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 23, anomata, anogeza uye akanaka. Anondida anondibata pa0716 845 261.
Ndiri murume ane makore 33 ndinotsvagawo mudzimai ane makore ari pasi pe32, anoshanda. Nhamba yangu 0778 125 744 uye paWhatsApp ndiripo.
Ndiri mukadzi ane makore 30 ndinodawo murume ane makore 35 – 45 ane zvaanoitawo muupenyu uye asina mukadzi. Ndine vana 2, anoda nezvangu ngaandibate pa0733 685 921.
Ini ndiri mukadzi ane makore 56 ndiri kutsvagawo murume ane makore 57 kusvika 60 asina utachiona hweHIV. Ndine twunhu twangu nemba yangu. Nhamba dzangu dzinoti 0773 278 651.
Ndiri murume ane makore 30 nemwana 1, ndiri HIV positive uye ndinotsvakawo mukadzi anondidawo ari positive asi vakadzi vevanhu kwete musafona. Nhamba dzangu idzi 0715 530 222, ndiri kuZvishavane.
Ndakambonyorera zvikaramba, ndiri murume ane makore 30 nemwana mumwe chete. Ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi. Nhare dzangu idzi 0714 002 343.
Makadii zvenyu? Ndiri mudzimai ane makore 31 ndinogara muHarare uye ndiri kutsvagawo murume anoda zvekuroora ari pachokwadi, anofaraira vana kunyangwe vasiri vake nekuti ini ndinoda vana. Ndine vana vaviri saka ngaave ane vana vakewo ane makore 37 kusvika pa41. Ndinoda anoshanda, ini ndinofarira zvekutengesa-tengesa. Ndiri HIV negative, anoda ngaandibate pa0775 230 401.
Ndiri kutsvagawo murume anondida wezera rangu kana kudarika. Ndiri mukadzi ane makore 44, ndine vana 4 uye ndinoshanda. Nhamba dzangu 0734 861 018.
Munofara here? Ndiri mudzimai ane makore 37 ndinotsvagawo murume ane makore 40-50 anodawo zvekuroora asi vemanyepo kwete. Vanoda fonai pa0773 946 758.
Ndiri murume ane vana 2 ndinotsvagawo mukadzi anondidawo anoda zvemusha. Anoda ngaandibate pa0782 211 332.
Ndiri mukomana ane makore 26, ndakaremara uye ndinodawo musikana akaremara kana asina wekuwanana naye. Zvizhinji tozotaura, nhamba dzangu 0773 085 568.
Ndiri mukomana ane makore 25 uye ndiri kutsvakawo musikana wokuroora ane makore 18-23. Nhare yangu 0779 988 791.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinodawo musikana ane makore 18 kusvika 23. Vanoda ndibatei pa0773 487 289.
Ndiri murume ane makore 45 ndinotsvakawo mudzimai ane makore 30 kusvika 45 ane vana chero asina hake. Ngaave ari pachokwadi ave kuda zvemba, anondibata pa0777 988 310.
Ndiri mukadzi ane makore 44 ndotsvagawo murume anoda kuroora. Ndakazvarwa ndine ziso rimwe chete, ndiri positive. Anoda nhamba dzangu 0775 449 875.